“Yeqaaqe Wirdwet” Maqaa Jedhuun CARD Sagantaa Qorannoo Waliin/Gamtaan Geggeessu Jalqabe – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
April 21, 2020 Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD) Uncategorized
Sagantaan qoraannoo waliinii/gamtaa CARD Wirdwet (Wirdwet Fellowship) CARDn jalqabame beekumsa biyyaattinaannootti (indigenous knowledge) fayyadamuun acuuccaa balleessuu fi karaa ittiin mirga sab-xiqqaa fi murna xiqqaa eegamu irratti hojjeta. sagantaan qorannoo gamtaa kun dubartootaa fi dargaggootni fedhii qorannoof qaban akka guddifatanii fi yaada hawaasa sirna-qabeessa ijaaruuf qaban akka guddifatan haala mijeessa.
sagantaan qorannoo waliinii/gamtaa “CARD Wirdwet” kan moggaafame dubartii jaarraa 19ffaa keessa naannoo waggaa 160 fuula dura jiraatteefii hawaasa Guraagee keessatti mirga wal-qixxummaa (dhiiraa fi dubartii) gaa’eela keessa jiraachuu qabuuf kan qabsoofte “Yeqaaqe Wirdwet” kan jedhamtu irraati. Wirdwet dubartii naannoo waggaa 160 fuula dura godina Guraagee ganda “Moher” jedhamutti dhalatte. seenaa afoola Guraagee keessatti akka “Yeqaaqe Wirdwet” tti yaadatamti (Wirdwet of Qaqe, her father). hanga yeroo dhihootti hawaasa Guraaggee keessatti seenaa afaaniitiin yaadatamti . Indaalegeetaa Kabbadaa bara 2014 keessa asoosama seenaa “Embitta ” yeroo barreesse, “Yeqaaqe Wirdwet” taatuu angafa godhee barreesse.
Asoosamni kun namoota hedduu waa’ee nadhittii kana tasa dhagaa’anii hin beekne akka beekan godhe. Waggaa afuriif tiyaatirri “Yeqaaqe Wirdwet” waltajjii mana Tiyaatira Biyoolessa Itophiyaa irratti agarsiifamaa ture, seenaa nadhittii kana beeksisuu irratti ga’ee guddaa taphate. Seenaan nadhittii mirga dubartootaaf yeroo dheeraa qabsoofte kana namoota hedduu dadammaqse . Qabsoon “Yeqaaqe Wirdwet” addumaan kan innii irratti xiyyeefate wal-qixxummaa dhiiraa fi dubartiin gaa’eela keessatti qabaachuu qabanii irratti.
Mirga addaa dhiirootni hadha manaa hedduu fuudhuuf qabanii fi dubartootni carraa miiltoo jirenya isaanii filachuu sarbaman irratti hedduu mormii dhi’eessaa turte. waanti Wirdwet aadaa kana mormuudhaaf muteeffatteef, abbaan warraa ishii kan biroo hadha warraa lama waan qabuu fi ishiin immoo mirga abbaa warraa ishii hikuu waan sarbamteef . Dubartootni abbaa warraa isaanii yoo hiikan kan abaaraman “anqiit” ta’u. Carraa hidhata ofii hikuu kan qabu dhiirsa qofaadha.
Seera aadaa kanaan mormuudhaan dubartoota kakaaftee gara mana murtii/dhaddacha aadaa “Yejoka” jedhamutti akka iyyatan goote. Warraksa isheen kaafate kana fuula dura, gara dhaddacha aadaa “Yejoka” jedhamu kana murtoodhaaf dhaquu kan dandaa’an dhiirota kophaadha. Wirdwet dhuma irratti abaarsa hawaasaa “anqiit” kana utuu hin sodaatin qabsoo ishii injifachuun abbaa warraa waliin jiraachuu hin barbaanne hiikun nama filaannoo ishiitti heerumuu dandeesseetti.
CARD sagantaa qorannoo waliinii/gamtaa kana maqaa kanaan moggaasuu kan murteessee , hojiin Wirdwet hojjette seena qabeessa waan ta’eef, kan nama kakaasuu fi rakkoo aadaaf fala aadaa dha’uu waan nama barsiisuufi.
Baatii torbaaf qooda-fudhatootni Wirdwet 2020 (Wirdwet Fellows 2020) yeroo isaanii guutuutti kennudhaan qorannoo isaanii kan hojjetan yeroo ta’u, CARD bakka hojii kan mijeessu, gorsitoota yerrodhaaf gorsa kennan kan miindessu (yoo barbaachisaa ta’e) fi baasii barbaachisaa kan ramadu taa’a . Xumura qorannoo kanaatti, bu’aa qprannoo isaanii beeksisuuf tokkoon tokkoon qooda fudhattoota irraa kan eegamu, waltajjii marii lama yookaan paanalii qopheessanii bu’aa qoraannoo isaanii dhi’eessu dha. Dabalataan CARD argannoo isaanii kana maxxansuutti dabalee argannoo isaanii karaa addaa addaa (soft copy and hard copy) uummata biraan kan ga’u taa’a.
Akkaataan itti fayyadama michummaa Wirdwet 2020 (werdwet fellowship 2020) gadi-fageenyaan asitti argama. Guyyaan xumuraa iyyannoon itti galfatamu Ebila 22, 2012.
Archived Posts Select Month July 2020 (1) May 2020 (1) April 2020 (4) February 2020 (3) January 2020 (3) December 2019 (6) November 2019 (1) September 2019 (1) July 2019 (1) January 2019 (1) November 2018 (1) October 2018 (1) September 2018 (3) May 2018 (1) April 2018 (3) March 2018 (3) November 2017 (1) October 2017 (4) September 2017 (5) August 2017 (11) July 2017 (19) June 2017 (3) May 2017 (4) April 2017 (14) March 2017 (6) February 2017 (24) December 2016 (4) October 2016 (1) September 2016 (4) August 2016 (6) July 2016 (7) June 2016 (11) May 2016 (14) April 2016 (11) March 2016 (8) February 2016 (6) December 2015 (2) November 2015 (1) October 2015 (2) September 2015 (1) July 2015 (1) May 2015 (3) April 2015 (2) March 2015 (1) February 2015 (3) December 2014 (1) October 2014 (1) August 2014 (1) July 2014 (4) June 2014 (2) May 2014 (1) April 2014 (2) March 2014 (1) January 2014 (1)